1. The First Prime minister of Bangladesh was
၁. ဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) ရဲ့ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်နာမည်သိပါသလား။
Answer : Mujibur Rehman
၂. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံးမြစ်နာမည်ကိုရောသိပါသလား။
၃. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံး အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့နာမည်ကို သိပါသလား။
Answer : Trans-Cadnada